धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको अग्निपरीक्षा : चुकेनौ भने समयले दोस्रो कुलमान बन्ने अवसर दिंदैछ
काठमाडौं : बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन विगत ४८ घन्टायता ठूलै चलखल भएको उच्च स्रोतहरूले जानकारी दिएको छ । ब्रोकरको एउटा समूहले यसका लागि नेप्से र धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावित बनाउन लागिपरेको छ । उच्च स्रोतको भनाई अनुसार आर्थिक चलेखल र चर्को लबिङको कसरत पनि भएको छ ।
हामी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यसो भन्नुमा लगानीकर्ताको हितबाहेक अर्को कुनै पनि स्वार्थ छैन । बैंकलाई लाइसेन्स दिएपछि प्रतिस्पर्धा थप बढ्नेछ, प्रतिस्पर्धाले थोरै भए पनि सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो ठम्याईं हो । कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीप्रति हाम्रो आग्रहपूर्वाग्रह छैन । हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । नेप्सेले नै गठन गरेको कमिटिले बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको त बैंकलाई लाइसेन्स दिने सबैभन्दा ठूलो प्लान नै हो । उनी बोर्ड अध्यक्ष भएर आएपछि तयार पारेको एक्सन प्लानमा बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषयले निकै ठूलो प्राथमिकता पाएको थियो । यसमा बोर्ड अध्यक्षले निकै ठूलो गृहकार्य पनि गरेका थिए । तर पछिल्लो समय बोर्ड यसमा अलिमौन बसेजस्तो देखिन्छ । कारण किन हो, यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन ।
यदि, तथ्यलाई नबिर्सिने हो भने नेपालको पुँजी बजार आधुनिकीकरण गर्नमा डा. रेवतबहादुर कार्कीको जति धेरै योगदान र मेहनत सायद अरु कसैको छैन । वर्षौंदेखि चलिआएको ओपन आउट क्राई सिस्टमलाई कार्की स्टक एक्सचेन्जको महाप्रबन्धक भएकै बेला सेमि अटोमेसनमा लगेका थिए । त्यसबेला अन्य व्यक्ति स्टकको हाकिम थिए भने त्यो काम नहुन पनि सक्दथ्यो । पुँजी बजारप्रति कार्कीको ज्ञान, अनुभव, सकारात्मक इच्छाशक्ति अनि सर्वसाधारणको विश्वासकै कारण त्यति बेला सेमि अटोमेसन सम्भव भएको थियो ।
कार्कीले पुँजी बजारमा ल्याएको यो युगान्तकारी परिवर्तनलाई हामीले कुनै पनि हालतमा बिर्सिनु हुँदैन । रेवतबहादुरको पालामा सेमि अटोमेसनमा गएको बजारले त्यसपछिका लामो समय खासै सुधारका अनुभव गर्न पाएन । यसबीचको अवधिलाई अध्ययन गर्दा बजारमा यो तथ्य प्रस्ट भेटाउन सक्छौं । उनले २०६४–६५ तिर गरेका सुधारले निरन्तरता पाउन फेरि २०७२–७३ सालसम्म कुर्नुपर्यो ।
जब उनी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भए अनिमात्र सीडीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सक्यो । डिम्याट कारोबार सम्भव भयो । कार्की धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा नभएको भए सायद अहिलेसम्म डिम्याट प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउन पनि सक्दथ्यो । यसअघिको नेतृत्वको काम गराईका पाराबाट यो भन्न सकिने पर्याप्त आधार छ ।
कार्कीले सुरु गरेको पुँजी बजार अटोमेसनले पूर्णता भने अनलाइन कारोबार सुरु भएपछिमात्र पाउनेछ । यो काम पनि उनले मात्रै पूरा गर्न सक्नेछन् भन्ने आमलगानीकर्ताको विश्वास छ । यसलाई कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गरे भने उनी आमलगानीकर्ताको हृदयमा सधैंका लागि बसिरहनेछन् । नेतृत्वले चाहेमा गर्न नसक्ने अनि सम्भव भन्ने विषय निकै कममात्र हुन सक्छ ।
जसरी एकजना कुलमान घिसिङले मुलुकलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न लागिपरेका छन् । सारा नेपालीले उनको जयजयकार गरिरहेको छ । उनी सबैका मनमस्तिष्कमा बसेका छन् । वर्षौदेखि नेपालीलाई अन्धकारमा राख्ने अनि अहिले उनैलाई असफल बनाउन खोज्ने षड्यन्त्रकारी यतिबेला नाँगिएका छन् । कुलमानको समर्थनमा प्ले कार्ड बोकेर नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिएका छन् ।
घिसिङले यतिबेला ठूलो नैतिक बिजय हासिल गरेका छन् । जनताको समर्थन भएका घिसिङलाई हटाउन वा षड्यन्त्र गर्नलाई अब हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । किन भने उनले जनताका पक्षमा काम गरेका छन् । हो, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकरलाई उपत्यका बाहिर पठाउने, दूरदराजका लगानीकर्ता सेयरसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न राजधानी धाउनु नपर्ने गरी सबै सुविधा सम्पन्न अनलाइन कारोबारको सुरुवात गर्न सके भने सायद पुँजी बजारमा रेवतबहादुर कार्की कुलमान जत्तिकै लोकप्रिय हुनेछन् ।
लगानीकर्ताको मनमस्तिष्कमा उनी सधैंका लागि छाउनेछन् । राष्ट्रका दोस्रो कुलमानको परिचय बनाउन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले जयजयकार गर्नेछन् । धितोपत्र बोर्डको वर्तमान कार्की नेतृत्वले सुधारका अनगिन्ती काम गरे पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सवालमा पछिल्लो समय केही पछि हटेको हो कि भन्ने आमलगानीकर्ताले आभाष गर्न थालेका छन् । स्रोतहरू भन्छ, एउटा समूह विभिन्न प्रलोभनसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका उच्च तहलाई प्रभावित पार्न लागि परेको छ ।
अहिलेसम्मको क्रियाकलापमा कार्की आर्थिक पारदर्शिता र इमान्दारिताका पर्याय नै बन्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार कार्कीले धितोपत्र बोर्डमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा उच्चतहका आफ्ना कर्मचारीको राय लिने गरेका छन् । कार्कीलाई सफल बनाउने वा असफल भन्नेमा त्यो उच्चतहको समूहको पनि उत्तिकै हात हुने निश्चित छ । जसरी बोर्ड अध्यक्ष भएर आएका बेला बैंकलाई लाइसेन्स दिन उनी कम्मर कसेर लागेका थिए, त्यसमा अहिले बिचलित भएनन् भने उनी लगानीकर्ताको परीक्षामा खरो उत्रिनेछन् ।
यता, स्टक एक्सचेन्जको वर्तमान नेतृत्व पनि बजारका बारेमा पूर्णरुपमा जानकार छ । व्यवहारिकरुपमै बजार बुझेको सीताराम थपलिया नेतृत्वले चाहेमा बजारको युगान्तकारी सुधार गर्न सक्छ । तर, इच्छाशक्ति अभाव र सानातिना लोभलालचामा फस्ने गल्ती गर्यो भने बजारको प्रगति त रोकिन्छ नै, स्वयं नेतृत्वकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुनेछैन ।
यसतर्फ नेप्से नेतृत्वले पक्कै पनि हेक्का राखेको हुनुपर्छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन स्टक नेतृत्वले सहयोग गर्ने हो भने विभिन्न फोरम र सामाजिक सञ्जालमा अनेक थरी आरोप लगाउनेका लागि गतिलो प्रहार पनि हुन सक्नेछ ।